Oosacha ndị na-azụ ahịa na ibelata mkpofu site na ọdịnaya ọgụgụ isi | Martech Zone
Edere arụmọrụ nke ọdịnaya dị mma, na-ekwenye 300% karịa na-eduga na 62% dị ala karịa ahịa ọdịnala, akụkọ Chọọ Mmasị. Ka a sịkwa ihe mere ndị ahịa ọkaibe gbanwere dollar ha na ọdịnaya, n'ụzọ buru ibu.
Otú ọ dị, ihe mgbochi ahụ bụ na ezigbo akụkụ nke ọdịnaya ahụ (65%, n'eziokwu) siri ike ịchọta, echeghị echiche ma ọ bụ na-adịghị amasị ndị na-ege ya ntị. Nke ahụ bụ nnukwu nsogbu.
"Can nwere ike inweta ọdịnaya kachasị mma n'ụwa," ka Ann Rockley, onye bidoro Ọgbakọ Ọgbakọ nwere ọgụgụ isi, “Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta ya nye ndị ahịa gị na atụmanya ya n'oge kwesịrị ekwesị, usoro ziri ezi, yana na ngwaọrụ ha họọrọ, ọ nweghị ihe o mere.
Ihe ọzọ bụ na, ịdepụta ọdịnaya ugboro ugboro maka ọtụtụ ọwa anaghị adigide, Rockley dọrọ aka ná ntị, sị: “Anyị enweghị ike imeli usoro a na-adịghị mfe.”
Maka echiche ụfọdụ, Ụlọọrụ Marketing Content na-akọ na ndị na-ere ahịa B2B nyochara na mbido afọ a jiri nkezi nke usoro 13 ọdịnaya:
93% - ọdịnaya mmekọrịta mmadụ na ibe ya
82% - ọmụmụ ihe
81% - blọọgụ
81% - akwụkwọ akụkọ
81% - ihe omume n’ime mmadụ
79% - isiokwu na weebụsaịtị ụlọ ọrụ
79% - vidiyo
76% - ihe osise / foto
71% - akwukwo ocha
67% - nkọwapụta
65% - ihe ngosi ntanetị
50% ma ọ bụ pere mpe - akụkọ nyocha, microsites, ebook, ibipụta magazin, ibipụta akwụkwọ, ngwa mkpanaaka na ndị ọzọ.
(Pasent na-ezo aka na ndị ahịa nyochara nyocha site na iji usoro ahụ.)
Ma, ihe karịrị ọkara nke ọdịnaya ahịa nwere nsogbu, dị ka a SiriusMkpebi akụkọ:
19% adịghị mkpa
17% amaghi ndi oru
11% siri ike ịchọta
10% enweghị mmefu ego
8% dị ala
Ọ bụrụ na 65% nke ọdịnaya gị kwụsịrị ma ọ bụ na-emegharị ndị na-agụ akwụkwọ, ị maara na ihe ga-agbanwe.
N'ihi ya, arịrịọ na nkwa nke ọdịnaya nwere ọgụgụ isi: ọdịnaya dị oke nghọta iji weghachite ma gbanwee onwe ya na onye ọ bụla na-agụ ya na ọwa ya kachasị mma. Nsonaazụ: Ntughari-mgbanwe, ọdịnaya na-agbanwe agbanwe nke na-ejide obi, uche na obere akpa.
Ihe omuma nke ihe omuma bu ihe ndia:
Ọdịnaya Structurally - Nhazi na-eme ka akpaaka nwee ike, akụkụ niile nke ọdịnaya nwere ọgụgụ isi na-adabere na ya.
Nkeji nkewaputara - Iji metadata iji hụ na ihe pụtara na gburugburu ya metụtara onye na-agụ ya.
Na akpaghị aka Chọpụta - Ndị nwe ọdịnaya na ndị ọrụ jiri ya chọta ya ngwa ngwa.
Reusable - Gafere imeghari ihe ndi ozo, enwere ike ichikota ya ma megharia ya otutu uzo.
Reconfigurable - Enwere ike ịhazigharị mkpụrụedemede, site na isiokwu, usoro, nkeonwe na ndị ọzọ, maka ahụmịhe onye ọrụ ahaziri nke ọma.
Imeghari - Na-akpaghị aka na-agbanwe na ọdịdị na ihe na onye nnata, ngwaọrụ, ọwa, oge nke ụbọchị, ọnọdụ, omume ndị gara aga, na mgbanwe ndị ọzọ. Infographic na-esonụ (na ala nke post a) na-abanye n'ime miri emi nke ọgụgụ isi, na otu esi edozi ya. okwu nke afọ ojuju mezuru nzube ya nke na-adọta, na-azụlite ma na-agbanwe ndị na-azụ ahịa. (Gbakwunye, belata ọnụ ahịa ndị na-ebute ụzọ nke ọma, iji buut.)
Ọ bụrụ na ịmeghị ihe ọ bụla, ịnwere ike iwalite ọdịnaya gị na arụmọrụ ya ozugbo site n'ịzụlite omume ndị a:
Jiri nyocha miri emi na njirimara zuru oke iji kọọrọ ọdịnaya gị, dị ka onye nta akụkọ ga-eme.
Mee ọdịnaya doro anya na onye na-azụ ahịa persona.
Jiri mkpado meta iji nyere ndị ahịa aka ịchọta ihe ha chọrọ.
Ntughari, jigharịa ma mee ka ọdịnaya gbanwee.
Hụọ pro copywriters.
Nyochaa arụmọrụ ọdịnaya.
Ule, soro, mụta ma gbanwee.
Ihe niile a tụlere, nnukwu ọdịnaya na-enweghị ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị dịka ịchụ ego ọkwọ ụgbọ ala na inye ya igwe iji merie agbụrụ ahụ. Ma eleghị anya, ọ bụ oge ahia gị igwe kwụ otu ebe maka a mma ọdịnaya engine.
Lelee egwu a infographic site na Widen, ndụmọdụ site na anyị otu, otu esi eme ka IQ ọdịnaya gi na ala ndi na agu akwukwo.
Tags: isiokwuAttributionndị ahịa b2bahịa b2bBlọọgụonye zụrụ yaikpe ọmụmụcontent MarketingNnyocha Institute Institute Contentarụmọrụ ọdịnayaihe ederedeụlọ ọrụ vieoụlọ ọrụ weebụnyocha miri emiederedeemailakwụkwọ akụkọnnwaleatụn'ime ihe omumeỌgụgụ ọgụgụ isiỌdịnaya AhịaInfographics Ahịameta na mkpadomicrositesmobile ngwa ọdịnalaakwụkwọ akụkọihe ngosi ntanetịphotosibipụta akwụkwọibipụta magazinrepurposeresearchakụkọ nyochaiwerekwasoshal midia ọdịnayatrackwebcastwebinarswebsiteakwụkwọ ọcha